Ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny linaclotide momba ny constipation
1. Inona no atao hoe Linaclotide (Linzess)?
2. Inona no ampiasaina amin'ny Linaclotide?
3. Inona ny mekanika ny asan'ny Linaclotide?
4. Ahoana ny fampiasana Linaclotide?
5. Inona no fatra amin'ny Linaclotide (Linzess)?
6. Inona no voka-dratsy mety hateraky ny Linaclotide?
7. Inona ny zava-mahadomelina na fanafody hifanerasera amin'ny Linaclotide?
8. Inona avy ireo fahasamihafana misy eo amin'ny Linaclotide sy lubiprostone?
9. Inona no fampahalalana hafa momba ny Linaclotide tokony ho fantatro?
Linaclotide (Linzess) dia fanafody am-bava nankatoavin'ny FDA izay matetika ampiasain'ny marary olon-dehibe mahatsapa fitohanana na fitohanana vokatry ny fivontosan'ny tsinay. Linaclotide 851199-59-2 dia eo an-tampon'ny lisitry ny kilasin'ny zava-mahadomelina vaovao antsoina hoe guanylate cyclase-C agonists.
Ny anarana marika Linaclotide dia Linzess ary zava-dehibe ny mahatadidy fa amin'izao fotoana izao dia tsy misy dikan-javamaniry Linaclotide. Ka raha mitady Linaclotide amidy na fampiasana samirery ianao dia mitsinjo ireo mpivarotra zava-mahadomelina amin'ny Internet izay mety hivarotra tsy ara-dalàna Hiditra Linaclotide zava-mahadomelina.
Linzess dia aganiôntôkôlitika côtaly c C ary peptide asidra 14-amino. anarana simika izany dia L-cysteinyl-L-cysteinyl-L-glutamyl-L-tyrosyl-L-cysteinyl-L-cysteinyl-L-asparaginyl-L-prolyl-L-alanyl-L-cysteinyl-L-threonyl-glycyl- L-cysteinyl-L-tyrosine, cyclic (1-6), (2-10), (5-13) -tris (disulfide).
Ny formula molekiola dia C59H79N15O21S6, ary ny lanjan'ny molekiola dia 1526.
Ny vovony Linaclotide dia fotsy ho fotsy ary fotsy be ao anaty rano. Izy io dia mety hihanaka kely amin'ny sodium klôro (0.9%).
Ny farany Linzess dia amin'ny endriky ny kapsula gelatin mafy misy vakana vita amin'ny Linaclotide. Kalsioma klorida dihydrate, L-leucine, titanium dioksida, selulosa microcrystalline, gelatin, miaraka amin'ny hypromellose dia anisan'ireo mavitrika ao amin'ny Linzess
Raha ny amin'ny fampiasana Linaclotide dia ampiasain'ny olona ho fitsaboana olana manokana amin'ny tsinay, toy ny fivontosan'ny tsinay, izay miavaka amin'ny fitohanana sy ny fitohizan'ny idiopathika mitaiza.
Linaclotide ho an'ny tsinay mora narary, aretin'ny soritr'aretina
Ny aretina entina amin'ny tsinay (IBS) dia aretina maharitra maharitra izay manakana ny tsinaina mivelatra mazàna. Ity mari-pahaizana Linaclotide ity dia antsoina koa amin'ny liogna sprax ary indraindray aretina azo avy amin'ny tsinay. Ny soritr'aretina lehibe amin'ny aretina dia ny constipation, ny aretim-pivalanana ary ny fanaintainan'ny vavony miaraka amin'ny constipation na mifandimby amin'ny fivalanana.
Ao amin'ny fanadihadiana ara-pahasalamana hametrahana ny fahombiazan'ny Linaclotide ho fanamaivanana ireo soritr'aretin'ny tsinay mora tezitra, ny marary olon-dehibe dia nampiasaina tamin'ny fitsapana roa tsy tapaka. Ny fitsarana voalohany dia nahitana marary 800 izay napetraka tamin'ny làlam-pitsaboana 290 mcg isan'andro ary 804 kosa no notendrena ho an'ny faharoa izay teo amin'ny placebo.
Ny marary rehetra ao amin'ireo vondrona roa ireo dia samy nahafantatra ny fitsipiky ny IBS Roma II ary nantenaina hahatratra ny dikany amin'ny fanaintainan'ny vavonin'ny vavony 3 farafaharatsiny amin'ny ambaratonga iray ka hatramin'ny folo ary farafahakeliny telo mihetsika tsipika an-tsitrapo feno isan-kerinandro isan-kerinandro amin'ny fitsaboana. fe-potoana.
Tamin'ny fiafaran'ny fotoam-pitsaboana dia nahatsapa ny soritr'aretin'ny BIS izay nihatsara kokoa ny marary raha oharina amin'ny takelaka plasebo:
Hafa mihetsika amin'ny tsipika bitika
Ny tsy fitoviana tonololo
Maro ny fotoana sy ny ezaka ara-batana ampiasain'ny olona handalovana.
Fanavotana fanaintainana ao anaty
Izany dia tena nanamafy ny famantarana Linaclotide ho fitsaboana mahomby amin'ny BIS.
Linaclotide ho an'ny Ny soritr'aretin'ny Idiopathic constipation (CIC)
Ao amin'ny fandinihana mba hanombanana ny fahombiazan'ny Linzess ho an'ny CIC soritr'aretina fitantanana, ireo mararin'ny olon-dehibe miaraka amin'ny constipation idiopathic nihanaka dia napetraka tamin'ny fitsapana arak'asa, multicenter fitsaboana, mitovy amin'ny fandalinana BIS voalaza etsy ambony.
Ny marary tsirairay dia samy nahafantatra ny fitsipiky ny fiasa romana novaina Romana II ary nahazo 72mg, 145 mcg Linzess, 290 mcg Linzess na fitsaboana plasebo isan'andro mandritra ny vanim-potoana fitsaboana 12-herinandro.
Tamin'ny fiafaran'ny fotoam-pitsaboana dia nahitan'ny mpikaroka ny fanatsarana ny soritr'aretina CIC bebe kokoa eo amin'ireo marary izay voan'ny fitsaboana Linzess raha oharina amin'ireo izay eo amin'ny plasebo. Indrindra fa niaina fanatsarana ny ambaratonga avo kokoa izy ireo amin'ny lafiny fangalarana stool, fihenan-dàlana tsy mihetsika ary fisondrotan'ny hetsika tsipika.
Amin'ireo doka Linzess telo dia tsy nisy vokany kely na dia soritr'aretina CIC aza. Izany dia manaporofo ny Linaclotide manondro ny fahafahany mitsabo CIC.
Tsy toy ny fanafody sasany ampiasaina amin'ny fitsaboana ny olana ara-pahasalamana voalaza etsy ambony, ny mekanika Linaclotide dia tsy mitovy - tsy tafiditra amin'ny vatanao izany. Ny mekanika Linaclotide tanteraka amin'ny tsinainao amin'ny alàlan'ny fitomboan'ny tsiranoka, vokatr'izany dia manatsara ny fihetsehana ny tsina sy ny fanamaivanana ny fanaintainana izay mety hitranga amin'ny olana ny tsinay.
Linaclotide (Linzess) dia mahatonga ny tsinaibe hamokatra tsiranoka betsaka kokoa amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny famokarana ny mari-pana gôwiosine monophosfat.
Rehefa mampiasa ny heriny hampitomboana ny tsiranoka ao amin'ny tsinainao i Linaclotide dia mihodina haingana ny tavy ny sakafo ary mihatsara ny havoana. Manatsara ny soritr'aretina misy ny fihetseham-po amin'ny hetsika amin'ny tsinay izany, toy ny fery ny fivontosana, ny aretim-bavony / ny vavony ary ny fahatsapana faobe tsy feno.
Rehefa manao a Mividy Linaclotide, mazava ho azy, amin'ny fangatahan'ny dokotera, dia ilaina ny miantoka fa mamaky ny toromarika momba ny fanafody homena anao amin'ny pharmacist ianao alohan'ny handraisana ny fanafody. Ny torolàlana dia hilaza aminao ny fatra Linaclotide tsara ho anao, ny fehezan-dalàna fatra tsara sy ny vanim-potoana fitsaboana fitsaboana sahaza.
Raha sendra mila fanazavana ianao Dosis Linaclotide, aza misalasala mifandray amin'ny dokotera na ny pharmacist anao mba hialana amin'ny voka-dratsin'i Linaclotide na ny fifandraisan'ny Linaclotide.
Amin'ny maha-fanafody am-bava dia tokony hoentin'ny vava ny Linaclotide. Tokony halainao izany raha tsy misy kibo, tsara kokoa minitra 30 alohan'ny hanaovana ny sakafo voalohany ao anaty iray andro. Ny zava-mahadomelina Linaclotide farany dia ao amin'ny endrika capsule ary tokony hitelina manontolo. Tsy tokony hanitsakitsaka na mitsiky ny kapika Linaclotide ianao
Saingy, raha manandrana mitelina ny kapoona ianao fa tsy zava-poana, dia afaka manokatra azy ireo ianao ary afangaro ny ao anatiny amin'ny sotro misy poma. Dia afeno avy hatrany ny fifangaroana ary arakaraka ny tsy maha izy azy akory. Afangaro fotsiny ny vola tokony hoentinao amin'io fotoana manokana io satria ny fitahirizana ny fangaro dia mahatonga ny zava-mahadomelina hampihena ny mahomby.
Raha tsy manana paoma ianao, dia azonao atao ny mampiasa rano ho solony. Raiso ny rano iray onitra na 30mm ny rano, sokafy ny kapisim-panatanana Linaclotide voatondro ary arotsaka ao anaty rano ny atiny. Tovozo ny rano- Linaclotide afa-po amin'ny 20 segondra ary avy eo hosotroina avy hatrany. Tahaka ny mifangaro epôgrafia, aza mangina ny atiny-atelina azy manontolo.
Raha toa ka ny fanafody dia natao hoentina amin'ny alàlan'ny fantsona nasogastika na gastric, mitadiava toro-lalana momba ny fitantanana avy amin'ny pharmacist anao na ny dokotera. Na izany aza, ity no fomba fiasa ankapobeny amin'ny fitantanana ny fika.
Fandrefesana ny rano madio sy ny mari-pana ao amin'ny 30 ml ary ampidiro ao anaty fitoeran-jiro madio.
Sokafy ny kapisily Linaclotide ary arotsaho anaty rano ny atiny (vakana)
Mid eo afovoan'ny rano sy ny vakana Linaclotide amin'ny alàlan'ny famatorana moramora ny fangaro tsy latsaky ny segondra 20.
Sariho ny fangaro rano-masira Linaclotide ao anaty syringe mety misy tendronony mitovy amin'ny an'ny katheter sy ny habeny mety. Avy eo avereno ny fangaro ao anaty fantsona nasogastric na gastric izay ampiasain'ny marary amin'ny alàlan'ny fampiharana ny fanerena maharitra fa haingana kosa ny 10 mL / 10 segondra ao amin'ny syringe.
Raha izany dia misy vakana Linaclotide vitsivitsy mijanona ao anaty fitoeran-javatra, ampio ny 30ml rano madio ao anatiny, hamafa ny fangaro ary hitantana azy araka ny efa voalaza teo aloha.
Rehefa vita amin'ny fitantanana ny ranom-bary Linaclotide sy rano ianao, ampiasao ny rano 10 ml farafaharatsiny mba hampihenana ny fantsom-pitantanana.
Ny fatra Linaclotide mifanentana dia miovaova amin'ny olona iray mankany amin'ny olona iray hafa, arakaraka ny toe-javatra izay nikasa azy hitsaboana ary koa ny fandraisan'ny olona ny fanafody azy. Averina indray fa zava-dehibe ny manamarika fa ny zava-mahadomelina dia tsy tokony ampiasain'ny olona izay tsy nahatratra ny taona 18.
Ny ankizy kely dia atahorana ho voan'ny aretina mafy Linaclotide effects tokony hampiasa ny fanafody izy ireo.
(1) Dose olon-dehibe matotra ho an'ny aretim-pankasitrahana tsy mety hitranga
Ho an'ny olon-dehibe iray izay mijaly amin'ny areti-mihetsika Bowl Irritable izay miaraka amin'ny constipation dia tokony maka doka Linaclotide 290 mcg isan'andro. Araka ny efa voalaza teo aloha dia tokony halaina anaty kibo foana ny zava-mahadomelina. Mba hiantohana izany dia alao alohan'ny sakafo voalohany iray ao anatin'ny iray andro.
(2) Dose olon-dehibe mifototra amin'ny fanafoanana
Araka ny filazan'ny Etazonia Sakafo sy ny Fanafody momba ny zava-mahadomelina, ny fatra Linaclotide natolotry ho an'ny olon-dehibe izay voan'ny constipation côtiôma (CIC) dia 72 mcg.
Na izany aza, ny fatra 145 mcg dia azo omena ny olon-dehibe marary CIC ihany koa, arakaraka ny fampisehoany sy ny fandeferany. Azonao atao ny mijery tsipika linzess 72 mcg ahazoana hevitra momba ny fiasan'ny dosie sy ireo mpampiasa izay nahasoa an'io.
Araka ny tsikera marobe 72 mcg, miaraka amin'ireo valin-kafatra hafa momba ny fanafody, ny marary manana olana ara-pahasalamana voalaza etsy ambony ary miandrandra tombontsoa avy amin'ny mety ho tombony dia tokony hampiasa azy io tsy tapaka. Ankoatr'izay dia tokony ho hita ao isan'andro mandritra ny vanim-potoana fitsaboana voatondro.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny Linzess dia mety hiteraka fifandraisan'ny Linaclotide amin'ny zava-mahadomelina isan-karazany. Raha izany dia mila milaza amin'ny dokoteranao ianao momba ny fanafody tianao atrehina ankehitriny alohan'ny hanombohana hampiasana azy (Linaclotide).
Ny vehivavy bevohoka koa dia tokony hitandrina be rehefa mieritreritra ny maka Linaclotide satria mety hitera-doza lehibe ny foetus. Tokony hitady ny sain'ny mpitsabo izy ireo mba hanamafisana ny fiarovana ary ny zaza ao am-bohoka dia tokony handray ny fanafody izy ireo. Toy izany koa no mihatra amin'ireo reny mpitaiza sy ireo maniry ho bevohoka mandritra ny fanafody.
Na izany aza, na dia manana SICrome COR na tsy tezitra aza izy ireo, ireo marary izay ambany taona 6 dia tsy tokony handray Ny vovony Linzess (851199-59-2). Ny fanandramana momba ny klinika dia nahatsikaritra fa ny zava-mahadomelina dia nahafaty ny totozy amin'ny zaza tsy ampy taona izay mitovy amin'ny taona 6 taona.
Ny zava-mahadomelina dia mifanentana amin'ny marary izay tsy nahatratra ny taonany satria nametraka azy ireo fa tena ambony be ny fivoaran'ny fivalanana ary ireo voka-dratsy ratsy mety hitranga.
Ankoatr'izay, misy ny angona klinika mampiseho ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny linzess eo amin'ireo marary efa 6 taona hatramin'ny 17 taona. Toy izany, raha misy ankizy na tanora amin'ny taona 18 izay mila fanamaivanana ICI na BIS dia tokony hotadiavina voalohany ny torohevitra avy amin'ny dokotera.
Mety maharitra roa herinandro ianao alohan'ny hahatsapanao fanamaivanana ny soritr'aretin'ny fanafody. Koa mahareta fahita kely amin'izany. Tohizo ny fampiasana azy araka ny fanoratana.
Na izany aza, raha toa ka tsy mihatsara na miharatsy ny soritr'aretinao na dia efa mampiasa linzess aza, aza maka dosie mihoatra ny fatra voatondro. Tsy tokony hanao izany ianao na ahoana na ahoana. Ampahafantaro ny dokotera anao ny hametraka ilay ambadiky ny tsy mahomby amin'ny fanafody ary ny toro-hevitra amin'ny hetsika manaraka.
Torohevitra ny hisorohana ny fampiasana ny Linaclotide raha toa ka voan'ny aretinao ny tsinainao.
Raha sendra soritr'aretina Linaclotide ianao, dia aza manandrana mandoa ny fatra tsy hita. Adinoy izany ary tohizo ny fatra manaraka amin'ny fotoana voatondro.
Raha sendra mihinana fatra Linaclotide (overdose) be loatra ianao na ny olon-tianao, dia tokony hoentina avy hatrany ny loza. Raha tsy izany dia afaka mifandray amin'ny serivisy fanampiana Poison ianao amin'ny alàlan'ny antso amin'ny 1-800-222-1222.
Araka ny karazany Linaclotide hevitra ary ny fikarohana siantifika, ireto manaraka ireto dia ny fiantraikany mahazatra amin'ny Linaclotide:
Ny fivalanana kely
Ny aretim-bavony malemy na tsy fahatsorana
Ny soritr'aretina mangatsiaka toy ny orona feno haingam-bolo / mavokely, fanaintainan'ny valanaretina fanaintainana na fikapohana
orona mamono na mikoriana
mandeha rà marefo
Na dia tsy dia mahalana aza ianao dia afaka mahatsapa ny iray amin'ireto lafiny manaraka amin'ny Linaclotide ireto:
Aretim-pivalanana na tsy mitohy
Ny aretim-pivalanana izay miaraka amin'ny fanaintainana na fahatsapana iray izay mahatonga anao hahatsapa ho toy ny maty
Fihetseham-po tsy mihetsika
Misafotofoto tsy mahazatra
Fihetseham-po tsy mety
Nitombo hatrany ny hetaheta
Mikoropaka ny tratra
Fanaintainan'ny vavony mafy
mainty, mandriaka, na fà maditra
fikosohana tarehy, molotra, lela, na tenda
Mila mitady fanampiana vonjy maika ianao raha toa ka mahatsapa fipoahana eo amin'ireo faritra voalaza etsy ambony, olana amin'ny fofonaina na fihomboana.
Raha misy ny voka-dratsin'ny Linaclotide tsy fahita firy hafa dia tokony hajanonao ny fampiasana ilay zava-mahadomelina ary ifandraisanao avy hatrany amin'ny dokotera anao mba hahazoana torolàlana fanampiny.
Fifandraisana amin'ny Linaclotide dia mety hitranga raha toa ka ampiasaina ny Linaclotide miaraka amin'ireo zava-mahadomelina hafa ao anatin'izany ny over-the-counters, vokatra vitaminina, vokatra ary ny fanafody voatondro. Ny sasany amin'ireo fanafody voalaza fa mety hiteraka fifandraisan'ny Linaclotide dia:
Aspirin ambany tanjaka
Dulcolax (fifaneraserana kely)
Metamucil (fifandraisana manokana)
Levothyroxine (fifaneraserana mety onony)
8. Inona ny fahasamihafanas eo Linaclotide sy lubiprostone?
samy Linaclotide sy lubiprostone dia fanafody eken'ny DFA ho an'ny fitohanana idiopathika mitaiza sy ny fivontosan'ny tsinay mora amin'ny olon-dehibe. Raha maniry ny fitomboan'ny tsinay ianao dia afaka misafidy ny iray amin'izy roa.
Na izany aza, manana ny tsy fitoviana maro izy ireo amin'ny:
(1)Ny kilasy misy azy ireo avy
Lubiprostone dia ao amin'ny kilasy zava-mahadomelina fantatra amin'ny hoe mpikatroka fantsom-panafody klorida. Amin'ny lafiny iray, Linaclotide (Linzess) dia mpikambana ao amin'ny kilasy misy zava-mahadomelina antsoina hoe agonistes guanylate cyclase-C.
Raha toa ny doka Linaclotide voalaza fa tokony ho raina indray mandeha isan'andro, indrindra alohan'ny sakafo maraina, ny Lubiprostone dia matetika atao indroa isan'andro. Noho izany, raha manana olana ianao amin'ny fahatsiarovana mihinana fanafody isan'andro, Linaclotide dia ho safidy tsara kokoa ho anao.
Ny zavatra iray hafa mampiavaka ny roa amin'ny resaka dosie dia ny habetsaky ny tokony halain'ny olona iray. Ohatra, ho an'ny CIC, ny fatran'ny Linaclotide natolotry dia 72 mcg ary ny an'ny Lubiprostone dia 8 mcg.
(3)Fifandraisana amin'ny zava-mahadomelina
Fahasamihafana hafa Linaclotide (851199-59-2) ary ny lubiprostone dia amin'ny resaka fifandraisana zava-mahadomelina. Miaraka amin'ny rongony 58 eo ho eo fantatra amin'ny fifandraisan'ny Linaclotide, ny fifandraisan'ny Linaclotide dia betsaka lavitra noho ny fampitahana amin'ny lubiprostone izay mifandray amin'ny fifangaroana zava-mahadomelina iray fotsiny.
Linzess dia nekena tamin'ny 30 ny volana aogositra 2012 raha toa ny fanekena ny lubiprostone tamin'ny Janoary 31, 2006
(5)Fifandraisana amin'ny sakafo
Rehefa manana sakafo ao an-kibonao ianao ary maka Linaclotide, dia mety hiharatsy ny soritr'aretin'ny vavoninao toy ny fivalanana, ny aretin-kibo ary ny entona, noho ny fifandraisan'ny Linaclotide-sakafo. Raha sendra mivalana mahery vaika ianao ary mihinana fanafody am-bava hafa, dia mety hanelingelina anao ny fitrohan'ity farany.
Mba hampihena ny tsy fifandevozan'ny gastrointestinal vokatry ny fifaneraserana ara-tsakafo, dia tokony ho raisina am-bavony foana i Linaclotide.
Amin'ny lafiny iray, misy tranga voaporofo ara-tsiansa momba ny fifandraisana ara-tsakafo Lubiprostone-sakafo. Tsy natao hifampiraharahana amin'ny mety ho fifaneraserana. Raha izany dia ilaina ny mitady fanazavana bebe kokoa amin'ny fotoana tsara indrindra hampiasanao ny fanafody avy amin'ny mpamatsy fitsaboana anao
(6)Ny atahorana ho an'ny reny bevohoka
Hatreto, fizarana fikarohana mifandraika sy Linaclotide dia mampiseho fa ny Lubiprostone dia mety hiteraka fahavoazana ho an'ny vohoka raha toa ny reny bevohoka dia maka ny fanafody. Etsy andaniny, tsy misy ny fanadihadiana iray mampiseho fa ny Linzess dia mety hiteraka fahavoazana am-bavany raha sanin'ny vehivavy manantena izy.
Ny mpahay siansa dia manasongadina an'io fiarovana azo tsapain-tanana io amin'ny fampihenan-kevitra ambany lenta amin'ny fanafody. Na izany aza, tsy azo fehezina tanteraka ny loza raha mbola mikaroka bebe kokoa ny fikarohana amin'izao fotoana izao mba hahitana ny fiarovana na ny loza ateraky ny zava-mahadomelina amin'ny zaza tsy miteraka.
Noho izany, na mikasa ny haka ny Lubiprostone na Linaclotide, ny reny bevohoka dia tokony manatona mpitsabo momba ny marim-pototra amin'ilay fanapahan-kevitra.
Ankoatra ny CIC, ny lubiprostone dia b
e ampiasaina ho toy ny fitsaboana ny Opioid-induced constipation (OIC) ary koa ny aretim-bavony Irritable miaraka amin'ny constipation ao amin'ny vehivavy izay vao 18 farafahakeliny.
Raha mikasika ny Linaclotide koa, ankoatry ny CIC, dia mitsabo aretim-bavony koa izy io ary miaraka amin'ny constipation (IBS-C) amin'ny vehivavy sy ny lehilahy. Tsy ampiasaina amin'ny fitsaboana ho an'ny OIC izany.
Rehefa misy izany Vidin'ny Linaclotide, somary avo kokoa noho ny an'ny lubiprostone. Amin'izao fotoana izao, ny vidin'ny Linaclotide dia eo ho eo amin'ny $ 450 ho an'ny kapoakan'ny 30, raha toa kosa ny vidin'ny 60 ny lubiprostone dia mitentina $ 396. Na izany aza, miovaova ny vidiny amin'ny mpivarotra iray mankany amin'ny mpivarotra hafa ary indraindray.
Ny mpanamboatra Linaclotide dia orinasa fantatra amin'ny anarana hoe Allergan raha ny lubiprostone kosa dia vokatra avy amin'ny orinasa Sucampo.
Na eo aza ny fahasamihafana etsy ambony, zava-dehibe ny manamarika fa ny lubiprostone sy ny Linaclotide dia amidy amin'ny mpanjifa amin'ny endrika kapsule am-bava ary tsy manana generika. Ary koa, ny zava-mahadomelina dia mitaky ny fametahana dokotera raha misy mahazo azy ireo amin'ny mpivarotra.
9. Inona fampahalalana hafa about Linaclotide tokony ho fantatro ve?
Tahaka ny fanafody hafa, ny vovo-dronono Linaclotide (851199-59-2) na ny kapsily dia tokony tahirizina tsy ho azon'ny ankizy tsy hanararaotra azy. Ary koa, amin'ny maha-fanafody fanafody azy, ny olona sasany dia mety halaim-panahy hizara ny zava-mahadomelina amin'ny hafa mba hisorohana ny olana amin'ny fandehanana any amin'ny dokotera.
Saingy, ny fizarana Linaclotide dia mampidi-doza satria ny dokotera dia tsy maintsy mandinika lafin-javatra maro alohan'ny hanomezana fanafody sy handingana ny dingana mety hiteraka vokatra ratsy.
Raha te hividy Linaclotide ianao, dia mila fantatrao fa amin'ny ankamaroan'ny firenena, anisan'izany ny Etazonia, dia mila dokotera ianao mba hahazoana ilay fanafody. Tsy mitanila izany na hanantena ny hividy an-tserasera ianao na mihoatra ny mpanohitra.
Raha momba ny fitehirizana, ny mari-pana fitahirizana Linaclotide 851199-59-2 dia 25 ° C (77 ° F). Na mifampiraharaha amin'ny vovoka Linaclotide ianao na kapsily, dia tokony hipetraka amin'ny toerana tsy misy hamandoana ilay fanafody ary, tsy tokony hozaraina na haverina afangaro. Fa alao ao anaty fitoerany voalohany ilay fanafody.
Aza hadino ihany koa fa mihidy matevina ilay vilia miaraka amin'ny desiccant ao anatiny mba tsy hahamando hamandoana.
Na te hividy Linaclotide 851199-59-2 amin'ny fampiasana indostrialy ianao, Linaclotide amidy na fampiasana Linaclotide hafa dia alao antoka fa avy amin'ny loharano malaza sy azo itokisana ianao. Ny tsikera an-tserasera Linaclotide dia afaka mitarika anao amin'ny mpivarotra tsara.
Raha tsy izany, tsy mazoto manao izay ilain'ny mpivarotra an-tserasera / amin'ny Internet Linaclotide amidy mety hivadika hivarotra vokatra contraband na hangalatra ny volanao mora.
Andresen, V., Camilleri, M., Busciglio, IA, Grudell, A., Burton, D., McKinzie, S.,… & Currie, MG (2007). Ny vokatry ny linaclotide 5 andro amin'ny fivezivezena sy ny tsinay amin'ny vehivavy miaraka amin'ny aretin-kibo miteraka fivontosana. Gastroenterology, 133(3), 761-768.
Chey, WD, Lembo, AJ, Lavins, BJ, Shiff, SJ, Kurtz, CB, Currie, MG,… & Baird, MJ (2012). Linaclotide ho an'ny fivontosan'ny tsinay mitebiteby: fisedrana mandritra ny 26 herinandro, jamba, jamba indroa, plasebo hanombanana ny fahombiazana sy ny fiarovana. Ny gazety amerikana momba ny gastroenterology, 107(11), 1702.
Cuppoletti, J., Blikslager, AT, Chakrabarti, J., Nighot, PK, & Malinowska, DH (2012). Ny vokatra mifanohitra amin'ny linaclotide sy lubiprostone amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fananana sakana amin'ny sela epithelial sy ny homeostasis finday aorian'ny fihanaky ny adin-tsaina sela. BMac pharmacology, 12(1), 3.
Harris, A. (2013). LINACLOTIDE. mpanolo-tsaina.
Johnston, JM, Kurtz, CB, Drossman, DA, Lembo, AJ, Jeglinski, BI, MacDougall, JE,… & Currie, MG (2009). Fandinihana Pilot ny vokatry ny linaclotide amin'ny marary miteraka fitohanana maharitra. Ny gazety amerikana momba ny gastroenterology, 104(1), 125.
Lembo, AJ, Kurtz, CB, MacDougall, JE, Lavins, BJ, Currie, MG, Fitch, DA,… & Johnston, JM (2010). Ny fahombiazan'ny linaclotide ho an'ny marary mitebiteby lava. Gastroenterology, 138(3), 886-895.
Lembo, AJ, Schneier, HA, Shiff, SJ, Kurtz, CB, MacDougall, JE, Jia, XD,… & Jeglinski, BI (2011). Fitsapana roa tsy tapaka an'ny linaclotide ho an'ny fitohanana maharitra. New England Journal of Medicine, 365(6), 527-536.